1. Sesame paste (Tahini paste) yakafuma mumapuroteni, amino acids, mavitamini uye zvicherwa, uye ine hutano hwakanyanya kukosha. 2.Calcium ine samee paste yakakwira zvakanyanya kupfuura miriwo uye bhinzi, kechipiri kune shrimp ganda. Zvinobatsira ...
1. Inogona kusimudzira kushanda kweitsvo Dzimwe ongororo dzinoratidza kuti mapea mapuroteni anogona kunge ari mamwe eprotein sosi yevanhu vane matambudziko eitsvo. Muchokwadi, sekutsvagurudza, mapea mapuroteni anogona kubatsira kunonoka kana kudzivirira kukuvara kweitsvo kune avo vane yakakwira BP. Zvinogona ...
Iyo inonyanyo kufarirwa nati inopararira iyo ichaunza zvirokwazvo shanduko yakanaka mukudya kwako ipeanut butter. Inogadzirwa nenzungu dzakaomeswa uye dzakakangwa uye inowanzo kuverengerwa muboka rezvikafu zvine hutano. Iyo izere nezvinovaka muviri zvinobatsira pahutano hwako chero bedzi ...
1. Chikafu chiri nyore - chero nguva, chero kupi, kugadzirira kudya nekuvhura magaba. 2. Sevha nguva - kana uchinge watenga, katatu nguva dzekuzorora. Sevha kuoma kwekubika, kune mufaro wemhuri. 3. Kudya kwakapfuma - mwaka mina ...
Kuti usimbise chido chevashandi chebasa, simbisa kutaurirana kwakanaka, kuvimbana, kubatana uye kubatana pakati pevashandi, kukudziridza timu kuziva, kusimudzira pfungwa yevashandi yekuva nebasa, uye kuratidza maitiro eSan ...
Musangano weSanniu Kambani Wakaitwa
Nguva inofamba uye nguva inobhururuka. Iyo 2020 yakabatikana yapfuura mukubwaira kweziso, uye 2019, izere netarisiro, iri kuuya kwatiri. Gore Idzva, rinobereka zvibodzwa zvitsva uye tariro. Musangano wepagore we2021 weSanniu Kambani wakaitirwa zvakanyanya muNew Era Hotel pa ...
Chinodyiwa kukosha uye chengetedzo yeYuba / Yakaomeswa Bean Curd Matanda
Bean curd stick inemamineral emhando dzakasiyana, anowedzera calcium, inodzivirira osteoporosis inokonzerwa nekushaikwa kwecalcium, kukurudzira kukura kwemapfupa uye kutarisisa musimboti wesoybean, ndiye shasha yezvikafu mune zvigadzirwa zesoya. Kazhinji idya yuba inogona b ...
Kudya Nzungu Dzakarungwa, Mutsva Bean Curd Stick, Soy Sauce Mapaketi, Ladyfinger Cookie, Hawthorn Strip, Vana Mabhisikiti,